मोरङमा १२ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन बाँझै
मोरङमा १२ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन बाँझै किसान भन्छन्, ‘हामीलाई सरकारी योजनाले छुन सकेन’
विराटनगरसँग जोडिएको कटहरी र ग्रामथान गाउँपालिकाका अधिकांश किसानलाई सिँचाइ सुविधा नहँुदा समस्या भएको छ । हिउँदे बाली लगाउने बेलामा सिँचाइको अभावले कैयौं किसानको खेत बाँझै रहेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले किसानहरूका लागि योजना बनाए पनि ग्रामीण भेगका किसानहरूलाई भने त्यस्ता योजनाले छुन सकेको छैन ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र प्रोत्साहनका लागि अर्बौं रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि लक्षित किसानसम्म सो बजेटले छुन सकेको छैन । आकासे पानीको भरमा किसानहरूले हिउँदे बाली लगाउन नपाउँदा साहु महाजनको ऋण लिएर लगाएको धानखेतीबाट ब्याजसमेत तिर्न नसकिने बताएका छन् ।
मोरङका कटहरी, ग्रामथान गाउँपालिकाका अधिकांश किसानको १२ हजार ८५ हेक्टर जमिनमा यतिबेला सिँचाइ अभावमा बाँझै छ । सिँचाइका लागि सरकारले कुनै सहयोग नगरेको आरोप स्थानीय कृषकहरूको छ ।
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका–४ का स्थानीय कृषक खुशीलाल माझीले तीनै तहका सरकारले अहिलेसम्म कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गरेकाले सिँचाइ सुविधा नपाएको गुनासो गरे । माझीले भने, ‘प्रत्येक वर्ष सरकारले यतिउति बजेट कृषिलाई छुट्यायो भन्ने सुनिन्छ । तर यहाँका वास्तविक किसानको जमिन सिँचाइको अभावमा बाँझै छ । सिँचाइमा अनुदान, उपकरणमा अनुदान भन्ने पनि सुनिन्छ । तर, हामीले पाउँदैनौँ ।’
सरकारी बजेटमा नेता कार्यकर्ताकै हालीमुहाली भएकाले आफूहरूजस्तो तल्लो तहका कृषकलाई त्यस्ता योजनाले छुन नसकेको माझीको अनुभव छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले छुट्याउने बजेट हाम्रै लागि भए कहाँ जान्छ त्यो बजेट ?’
ग्रामीण क्षेत्रका किसानको आम्दानी र जीविकोपार्जन कृषि पेसाबाटै हुने गरेको छ । हिउँदे खेती गर्नका लागि सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा किसानहरू चिन्तित बन्दै आएका छन् । स्थानीय कृषक लेरधु विश्वासले. भने, ‘सिँचाइको अभावले गर्दा नै वर्षेनि हिउँदै बाली उत्पादनमा लाखौं टनले ह्रास हुँदै आएको छ ।’
उनले थपे, ‘हुनेखानेहरूले त महँगो नै भए पनि खेतमा डिप बोरिङ गरेर सिँचाइ गरेका छन् । तर, त्यसरी सिँचाइ गर्दा लागत धेरै पर्न आउँछ । डिजेलको भाउ महँगो छ । विद्युतबाट सिँचाइ गर्दा लाइनको समस्या हुन्छ । त्यसकारण खेतहरू बाँझै राख्न बाध्य हुनुपर्छ । अझ समयमा मल, बिउसमेत नपाएपछि के गर्ने ? यिनै समस्याका कारण खेत बाँझै रहेको हो ।’
आकासे पानीको आसमा बाँझो खेत जोतेर राखे पनि पानी पर्याप्त नपरेकाले बाँझै रहेको मोरङको कटहरी गाउँपालिका–६ का कृषक रतनकुमार सरदारले बताए । ‘सरकारले जहिल्यै कृषिको उत्पादकत्व बढाउने कुरा गर्छ । तर खै त उपलब्धि ? सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि ठूलो काम केही गरिदिनु पर्दैन, सिँचाइ सुविधा र समयमा मल बिउ मात्र उपलब्ध गराए पुग्छ ।’
सरकारले कृषिका लागि लक्षित किसानसम्म पुग्ने र छुनेगरी प्रभावकारी कृषि योजना ल्याउन अब पनि ढिला गरे कृषि पेसाबाट अधिकांश कृषकहरू पलायन हुन सक्ने दाबी पनि उनले गरे । ‘कृषिक्षेत्रको चामत्कारिक विकासका कुरा भाषणमा मात्र सीमित भएको उनको ठम्याइ छ ।
सरकारले थपे, ‘कृषियन्त्रलगायतका सरकारी सुविधा वास्तविक किसानले पाएका छैनन् । सौर्य ऊर्जाबाट सिँचाइ सुविधाको अनुदान कताकता बाँडेको सुनिन्छ । तर दुर्भाग्य, त्यस्तोे सुविधा हामीसम्म आइपुग्नै सकेन । महँगो कार चढेर खेतको आली कहिल्यै नटेक्ने किसानले चाहिँ पाएको सुनिन्छ ।’
यति बेला मोरङका खेतमा सिँचाइको अभावले रोपाइँका लागि तयार गरिएको ब्याडसमेत सुक्न थालेको छ । सिँचाइको सुविधा र आकासे पानी परेको भए यतिबेला सबै खेतमा धान रोपिसकिन्थ्यो । बोरिङ सुविधा र सिँचाइ गर्न पाएका कृषकका खेतमा भने यतिबेला धान धमाधम रोपिँदै छ । तर, सिँचाइ नै गर्न नपाएका कृषकहरू भने आकासे पानीको पखाईमा छन् ।
आफूहरूले वर्षेनि यही नियति भोग्न बाध्य रहेको मोरङकै रंगेलीका कृषक राकेश राजवंशीले बताए । यही कारण वर्षेनिक धान उत्पादनमा गिरावट आइरहेको उनले बताए ।
कृषि निर्देशनालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख प्रकाशकुमार डाँगीले गत वर्ष हिउँदेबालीमा (हिउँदमा रोपिएको धान) ८ प्रतिशतले गिरावट आएको जानकारी दिए ।
उनले यस वर्षको हिउँदे धान रोपाइँको तथ्यांक आइनसकेको बताए । उनले सिँचाइ सुविधा नहुँदा कृषि उत्पादनमा कमी आउनु स्वाभाविक भएको बताउँदै सरकारले सिँचाइ सुविधाका योजनाहरू ल्याएको बताए । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन र सिँचाइका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन जिल्ला कृषि कुञ्जहरूमार्फत प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लामा सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम योजनामा राखिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ५, २०७६, ०८:०४:००